Inhlangano engqiqweni yomsebenzi
Ingcamango yokuhlela indawo yokusebenzela ukusetyenziswa kwexesha ngempumelelo, ukwenzela ukudala umgudu omncinci kunye noxinzelelo njengoko kunokwenzeka. Uninzi lwexesha abantu bayichitha emsebenzini, ngoko umbutho onengqiqo wendawo yokusebenzela ubaluleke kakhulu. Imveliso kunye nentlalo kuxhomekeke kulo.
Umbutho wendawo yokusebenzela.
Kubalulekile ukwenza njalo ukuze ufumane izinto eziyimfuneko zokuchitha ubuncinci bexesha.
Ukuba into isetyenziswa ngokuqhelekileyo, kufuneka ibe kufuphi.
Into enzima kakhulu into, ngoko kufuneka ibe kufuphi.
Ukuba indawo yokusebenzela isekweni, inika isimo sengqondo nesimo sengqondo sokusebenza. Uza kusindisa amandla, ixesha kwaye uzikhulule ekugqibeleni kunye noxinzelelo - banefuthe elibi kwimpilo.
Iinkalo eziphambili zentlangano yomsebenzi.
Indawo yokusebenzela kufanele ikhululeke. Yintoni ekulungeleyo kuwe, mhlawumbi omnye umntu engakhululekile kwaye ngokungafaniyo. Kukho imigaqo emiselweyo.
Kufuneka ukuba ukhethe izinto ze-ergonomic, zicingelwa ukuba zisebenze kakuhle. Kule meko, umsebenzi uya kuvelisa, kwaye umzimba wakho awuyi kugxininiswa. Isikhundla sokusebenza akufanele sihlanganise ifenitshala, kuphela izibonelelo eziyimfuneko, iithalafu, iikhabhinethi. Iibhakethi kunye namashalofu anamaxwebhu athile asetyenziswa rhoqo kufuneka abe khona ukuze, ngaphandle kokuvuka, bafumaneke.
Idesksi ayifuni ukuba ihlanganiswe neemfumba zephepha kunye nezixhobo. Ukuba usebenzisa ikhompyutheni yomsebenzi, ngoko akufanele ihlale ininzi yendawo yokusebenzela, ngenxa yale nto kufuneka usebenzise imouse engena-wire kunye nekhibhodi, abahloli abancinci.
Ukuba izandla azange zinyanzeliswe kwaye zikhona etafileni, ukuphakama kwetafile kulungile. Ukuba kunzima ukutshintsha ubude betafile, iisitulo zeofisi, ezixhaswe ngokubuyisela emuva nokuphakama, ziya kukunceda ukhululeke etafileni. Xa ulungisa ukuphakama kwesihlalo, iinyawo kufuneka ziphumle phantsi. Ungasebenzisa inkxaso phantsi kweenyawo zakho. Iingcambu ze-armrests zesihlalo kufuneka zithinte izibonda. Isihlalo sosila ulungelelanise, ukwenzela ukuba ungabi nciphisa umqolo ongaphantsi.
Njengamanje, akukho mlawuli owenzayo ngaphandle kwezixhobo zekhompyutha. Kodwa ukuba uhlala kwi-monitor ilininzi, kuya kuba nzima impilo yakho.
Umbutho onokulinganisa indawo kwindawo yokusebenza .
Amehlo kufuneka abe phantsi okanye kumgangatho kunxalenye engaphezulu kweso saziso.
Ukugcina iibhuthi, izibini, umgudu, intamo kunye nezinye iinxalenye zomzimba ngaphandle kokuxinezeleka.
Yonke imizuzu engama-15, thatha amehlo akho kwisebe, sebenze namaxwebhu.
Ngexesha elide, musa ukuhlala kwindawo enye.
I-iliso ayifanele ibe neembonakalo kunye ne-glare.
Hlaziya i-screen kweso.
Sebenzisa ukuma kwamaxwebhu kunye neencwadi.
Ukuba usebenza namaxwebhu ukongeza kwikhompyutheni, uya kulufuna isibane sedesksi njengomthombo owongezelelweyo wokukhanyisa. Ephantse kweso sihlandlo, faka izinto eziza kukukhumbuza indlu: i-bauble esinikwe ngumntu othandekayo okanye intsapho yesithombe. Kodwa izinto ezinjalo kwideskithophu kufuneka zingabi ngaphezu kwama-3. Ungayifaka indebe ekhoneni elingasentla elingasese, iwashi kunye nesitshalo sezindlu. Iingcaphephe zincoma ukubeka umthombo wezinto eziyimfuneko zolwazi olufunekayo-iphephandaba leveki nganye, iimagazini zamashishini. Injalo intlangano yomsebenzi iya kuthathwa njengento efanelekileyo.
Endaweni yomsebenzi, gcina umyalelo .
Kwiikhabhinethi kukho izinto ezininzi ezingekho kubango lokuqala. Kufuneka ubeke kuzo kwiindawo ezithile, nge-alfabhethi, ngokulandelelana kwexesha, ngoko akufanele uchithe ixesha lokukhangela ulwazi oluyimfuneko. Ungavali iikhabhinethi ngezinto ezingenasidingo kunye ezingapheliyo kunye namaxwebhu. Njalo inyanga, uhlambuluke entwasahlobo. Ukukhutshwa kwamaxwebhu angafunekiyo. Umgaqo ophambili awuyi kuphazamiseka ngokufunda nokufunda, kufuneka uyenziwe emva kokuhambisa.
Endaweni yomsebenzi, kufuneka ushiye izinto eziyimfuneko nezinto, oku kuya kunceda ukuqedela loo nto. Ukuba ukhubeka kwizinto kunye nolunye ulwazi olungaxhomekiyo kwimisebenzi yakho, umtshintshe kuyo. Kwaye kuthatha ixesha elide. Ukuhlala uhlahlela ngamaxwebhu, ekufuneni okuyimfuneko, kuthatha ixesha kunye neengqalelo, kwaye amaphepha angafunekiyo kufuneka athathwe ngokukhawuleza.
Ukuze ungayibhideli idesktophu, akudingeki ukuba uvule iifolda ezininzi kunye neidayari. Kwitheyibhile kufuneka ibe yilezo zinto zokusebenza kunye nezixhobo ozenzayo zonke iintsuku. Amanye amaxwebhu kufuneka abe kufuphi, kodwa kungekhona kwideskithophu. Kwaye izinto ezimbalwa ziya kuba kwideskiti yakho, kuya kukhululeka ukuba kusebenze. Gcina izinto ozifunayo. Kufuneka ugcine iimpahla zeofisi kumququzeli wedesktop. Ukulungisa umyalelo kwitheyibhile, kufuneka igcinwe.
Ukuba kukho ukhetho olunjalo lokukhetha indawo yetafile, ke ungahlali kunye nomqolo wakho okanye kwindlu. Uya kuba nexesha elide, kuba unakho nganoma naluphi na ixesha ukuthetha ngasemva ngasemva. Ukujongana nomnyango kungcono ukuba ungahlali, uya kuphazamiseka yiindwendwe. Kungcono ukuhlala kunye nomqolo wakho ngokuchasene kunye nodonga, kwaye iwindow nomnyango kufuneka kube kwicala. Ukuba itafile ibhekane nodonga, kwaye kufuneka ucinge ngazo zonke iiyure eziyi-8, ngoko ke ukuba uvunyelwe eofisini, uyihombise ngeposta okanye ifoto.
Indlela yokugcina umyalelo kwi desktop.
Qalisa usuku lomsebenzi uze uphele ngokuyalela indawo yokusebenzela.
Musa ukugcina amaxwebhu kwideskithophu.
Sebenzisa umququzeleli wezinto eziyinxalenye, ipenki, ipensela kunye nezinye izesekeli.
Ukuba uthatha amaxwebhu kwiifolda, iifayile, iifolda, kufuneka ufunde indlela yokubuyisa kwakhona.
Xa uhlalutya iipilisi zamaphepha, akufanele zisuswe kwenye indawo ukuya kwenye kule ofisi.
Intlangano engqinelanayo yomsebenzi wabo.
Kubalulekile ukuba kukho umyalelo oqhubekayo kwindawo yokusebenzela.
Yonke imihla ekufuneka ibe yiyo zinto kunye nezinto ezifunekayo ukuze zisetyenziswe.
Iinkqubo kunye nefenitshala kufuneka zivelise, zikhuselekile, zikhululeke ngokusemandleni.
Ukubambisana okufanelekileyo kokugcinwa kwedokhumenti kuya kukuvumela ukuba uchithe inani elincinci lexesha elifunayo idokhumenti efunekayo.
Ekugqibeleni, songeza ukuba imigaqo-siseko yokulungelelanisa indawo yokusebenzela ngokusebenzisa intlangano efanelekileyo ukuqinisekisa ukuveliswa kunye nokuthuthuzela.
Intsapho kunye nomsebenzi kwimpilo yowesifazane waseRussia wamanje
Indlela yokufunda iinjongo zabalingane, ngokusekelwe kwisibheno kuwe?
Indlela yokujongana nokucaphukisa, ukukhathazeka kunye neengcikivo emsebenzini
Indlela yokuziphatha kwiziko lenkampani
Iindlela ezili-10 zokuyeka ukulala emsebenzini
Indlela yokuhlambulula isisu emva kwesigaba se-caesarean
U-Julia Proskuryakova waqala ukuxelela ngokukhulelwa okude kulinde
Iziphumo zokubhoboza inamba
I-anti-cellulite i-massage theory kunye nevidiyo
Iibhatateshi kunye namasiksi omsi
I-Aromatherapy yonyango ngamafutha abalulekileyo
Yintoni i-PMS yabasetyhini?
Ukusetyenziswa kwezithandane zokunyanga izifo ezahlukahlukeneyo
Indlela yokukhetha isafa esihle
Imigaqo yokukhusela umntwana kunye nabazali bakhe
I-recipe yelayisi ye-rice ipudding ne-apple sauce